Soomaaliya ALLE ayaa u maqan! | XORRIYA NEWS
Home Wararka Soomaaliya ALLE ayaa u maqan!
Soomaaliya ALLE ayaa u maqan!
Soomaaliya waxa si aan xad laheyn saameyn ba’an ugu haya cudurkan dilaaga ah ee Covid-19. Soomaaliya waxa ay kaalinta kowaad kaga jira dalal ku yaalla geeska Afrika ee uu xanuunkani saameyay!
Fowziya Abiikar Nuur, wasiiradda caafimaad Soomaaliya
Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in 24-kii saac ee ugu dambeeyay guud ahaan dalka laga diiwaan geliyay 51 xaalado cusub oo ah cudurka COVID-19.
Guud ahaan kiisaska Soomaaliya laga diiwaan geliayay ayaa kor u dhaafaya 700 oo kiis, halka dhimashadu ay 25 ruux kor u dhaaftay! Dadkan laga helay cudurkan ayaa badankoodu waxa ay kunnool-yihiin magaalada Muqdisho. Sidoo kale Puntland qeybo kamid ah, qeybo kamid ah Koofur-galbeed, Jubbaland iyo Gal-mudug ayaa kamid ah meelaha laga helay!
Kama jiro guud ahaan dalka baaritaan caafimaad oo laysku halleyn karo, walow meelaha qaar, sida: Caasimadda iyo caasimadaha maamullada qaarkood wax uun ay ka jiraan! Intii kale ee dalka cidi kama warqabto waana ay adagtahay in laga war qabo sababo badan awadood. Taas ayaana Soomaaliya ka dhigeysa dal wajahaya khatar aan qarsooneyn!
Dadka qaar ayaa aaminsan in nidaamka ay dowladdu u marto baahinta iyo baarista xanuunka iyo qaabka uu u kordhayaaba yahay qaab aan sax aheyn, walow ay jirto in ay wax uun qabaneyso! Sida wararka qaar lagu kalsoonaan karaa sheegayaanna, waxa jira dad fara badan oo baaritaan la’aan xanuunkan dartii ugu dhimanaya meelo badan oo dalka kamid ah, Muqdishaba ha ugu horreysee!
WQ: Mohamud Maalin